Waa kuwan waxa la sameeyo marka aad ku dhowdahay hawlgabka oo ay ku dhacdo masiibo caalami ah
Waa kuwan waxa la sameeyo marka aad ku dhowdahay hawlgabka oo ay ku dhacdo masiibo caalami ah
Waqtiga ugu wanaagsan, hawlgabku ma fududa.
Coronavirus-ku wuxuu kaliya dadka sii dejiyay xitaa intaa ka sii badan.
App-ka Maaliyadda Shakhsiyeedka Personal Capital wuxuu sahlay hawlgab iyo shaqaale waqti-buuxa ah bishii Maajo.In ka badan seddex meelood meel oo qorsheynayay inay ka fariistaan ​​​​10 sano ayaa sheegay in burburka dhaqaale ee ka yimid Covid-19 ay la macno tahay inay dib u dhigi doonaan.
Ku dhawaad ​​1 ka mid ah 4tii hawlgabka hadda ah ayaa sheegay in saamayntu ay ka dhigtay kuwo u nugul inay shaqada ku soo laabtaan.Kahor masiibada, 63% shaqaalaha Mareykanka ayaa u sheegay Personal Capital inay dareemeen inay dhaqaale ahaan diyaar u yihiin hawlgab.Sahankeeda hadda, tiradaasi waxay hoos ugu dhacday 52%.
Marka loo eego cilmi-baaris dhawaan laga sameeyay Xarunta Transamerica ee Daraasaadka Hawlgabka, 23% dadka hadda shaqeeya ama kuwa dhowaan shaqeeya ayaa sheegay in rajada hawlgabku ay hoos u dhacday sababtoo ah cudurka faafa ee coronavirus.
"Yaa ogaa bilowgii 2020 markii waddankeenu uu soo wajahday heerar shaqo la'aan taariikhi ah oo hooseeya in arrimuhu si dhakhso ah isu beddelaan?"Catherine Collinson, oo ah madaxa guud ee xarunta iyo madaxweynaha ayaa waydiisay.
Waqtiga boostada: Meey-28-2020